Ny Ubuntu Kanelina dia azo tsapaina afaka andro vitsivitsy | Ubunlog
Vaovao farany momba ny kanelina Ubuntu: azonay atao sahady ny mitsapa ny loha-hevitrao sy tsy ho ela ny rafitra miasa
Ny alakamisy lasa teo dia navoakan'ny Canonical i Eoan Ermine, ny kinovan'ny rafitra fiasa Oktobra 2019 sy ny tsirony ofisialy rehetra. Raha fintinina, miaraka amin'ny Ubuntu, misy tsiro 8 misy, dia ireo Ubuntu voalaza etsy ambony, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio ary Ubuntu Kylin. Saingy amin'ny ho avy antonony dia hiresaka sivy isika, satria efa misy ny tetik'asa izay Kanelina Ubuntu lasa tsiro ofisialy.
Tamin'ny faran'ny volana septambra, ilay mpitarika ny tetikasa fantatra ankehitriny amin'ny anarana hoe Ubuntu Cinnamon Remix nilaza taminay fa hamoaka kinova fitsarana izy alohan'ny fomba ofisialy Eoan Ermine. Tsy tonga ara-potoana izy ireo, saingy ora vitsy lasa izay dia nilaza taminay izy ireo fa efa ho vonona ity kinova ity ary hozahantsika hosedraina tsy ho ela. Etsy ankilany, inona izany efa misy ireo fonosana lohahevitra kimmo-gtk-lohahevitra y kimmo-icon-theme izany dia ampahany amin'ny lohahevitra ampiasain'ny Ubuntu Cinnamon amin'izao fotoana izao.
Ubuntu Cinnamon, tsiro ofisialy ho avy, ny fifaninanana tsara indrindra ho an'ny Linux Mint
Ny lohahevitra Ubuntu Kanelina dia azo tsapaina ankehitriny
Azonao atao izao ny mitsapa ny lohahevitra kimmo-gtk-sy kimmo-icon-ao an-trano, amin'ny alàlan'ny fametrahana azy amin'ny PPA tsy marin-toerana ao amin'ny https://t.co/7udiT9nAvu ! Raha te-ho geek ianao dia azonao atao ihany koa ny mahazo azy ao amin'ny github anay, izay foana, https://t.co/KNGltYtsHN . Hamarino tsara raha manao izany amin'ny 19.10 Eoan! pic.twitter.com/j9Roel8O4k
- Ubuntu Cinnamon Remix (@UbuntuCinnamon) Oktobra 19, 2019
Azonao atao izao ny mitsapa ny lohahevitra kimmo-gtk-sy kimmo-icon-ao an-trano, apetrakao ao amin'ny PPA tsy milamina ao https://launchpad.net/~ubuntucinnamonremix/+archive/ubuntu/unstable! Raha te ho geek ianao dia azonao atao koa ny mahazo azy amin'ny github misy antsika, izay foana https://github.com/ubuntucinnamonremix. Hamarino tsara fa hatao amin'ny 19.10 Eoan!
Raha te hanampy ny tahiry (tsy miovaova) dia mila manokatra terminal isika ary manoratra izao manaraka izao:
Aorian'izay isika dia afaka mametraka ireo fonosana, iray ho an'ny lohahevitra ary iray ho an'ireo sary masina, miaraka amin'ity baiko hafa ity:
Azontsika atao ny mifidy azy ireo amin'ny fampiasana fitaovana toa ny GNOME Retouching.
Hafatra fitantanan-draharaha avy amin'ny @ItzSwirlz :
Hamoaka ny fananganana fanandramana voalohany izahay atsy ho atsy, mba hisarika ny saina (amin'ny fomba tsara), satria mila fanampiana avy aminareo ry zalahy mba hahazoana antoka fa mandeha ny distro sy ny fangatahanay ary afaka manome sary anay ianareo ary manome anjara biriky ho anay. Fampahalalana bebe kokoa tsy ho ela.
- Ubuntu Cinnamon Remix (@UbuntuCinnamon) Oktobra 20, 2019
Hafatra fitantanan-draharaha avy any @ItzSwirlz: Hamoaka ny kinova fitsapana voalohany anay tsy ho ela izahay, mba hisarihana ny saina (amin'ny fomba tsara), satria mila fanampiana avy AMINAO izahay hahazoana antoka fa miasa ny fizarana sy ny fampiharana ary afaka manome sary anay ianao ary manome anjara ho anay. Fampahalalana bebe kokoa tsy ho ela.
Amin'izao fotoana izao daty famotsorana marina tsy fantatra avy amin'ny kinova fitsapana voalohany an'ny Ubuntu Cinnamon (Remix), saingy tokony ho tonga afaka andro vitsivitsy. Rehefa tonga ny fotoana dia tsy maintsy tadidintsika fa ho kinova fitsapana natao hananana fifandraisana voalohany, fa tsy hametrahana azy amin'ny fitaovana famokarana. Ny zavatra tsara indrindra, toy ny ataontsika alohan'ny hanandramana fizarana hafa, dia ny fametrahana azy amin'ny VirtualBox, manomboka ny sary ao amin'ny GNOME Boxes na mamorona pendrive fametrahana mba hampandeha azy amin'ny Live Session. Mahatsiaro te hanao izany ve ianao izao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » dabilio » Birao hafa » Vaovao farany momba ny kanelina Ubuntu: azonay atao sahady ny mitsapa ny loha-hevitrao sy tsy ho ela ny rafitra miasa
Xournal ++, fampiharana iray handraisana naoty an-tànana ao anaty rakitra PDF
WebSocket Inspector, ilay fiasa vaovao izay ho tonga ao amin'ny Firefox 71